Nhau - MAZANO ARI ZVINOKOSHA EKUshongedza IMBA YAKO NEHUNDI UYE IRON ART
MAZANO ARI ZVINOKOSHA EKUshongedza IMBA YAKO NEHUNDI UYE IRON ART
Nhasi munyaya ino, ndinoda kugovera neshamwari mamwe mazano ekushongedza imba yako nenzira inokosha. Iyi nzira gumi nenhatu dzekushongedza dzakareruka uye dzakanyanya kubva pahuni art uye iron art kugadzira inoyevedza uye inoyevedza imba nzvimbo.
▲ Ungaisa sei skrini yeTV uye madziro ekumashure?
Muimba yekutandarira, unogona kugadzira yakakosha "yakavakirwa-mukati TV kumashure madziro" kuita kuti nzvimbo yese iwedzere kupfupika. Kana TV yangopinzwa mumadziro, inoderedza huruva. Pasi pechidzitiro cheTV, shandisa huni nesimbi pakushongedza kupedzisa nzvimbo yese yekugara yakatenderedza TV skrini.
▲ Windows nemaketeni
Nzvimbo huru yegirazi mahwindo inovimbisa kuvhenekera kwemukati. Sarudza maviri-layer gauze maketeni kuti imba yese yekutandarira itaridzike zvakanyanya kupenya.
▲ The huni TV kumira
Kana iyo TV sikirini yaiswa mumadziro, shandisa huni TV stand sesherufu. Iwe unogona kuchengeta zvimwe zvinhu pairi uye kudzivirira kuzviisa pasi; zvichava nyore kuchenesa imba yekutandarira pasi.
▲ Iyo TV huni inomira ine madhirowa nemasherufu
Shongedza masherufu esimbi nemadhirowa mune yakasviba ruvara. Vashongedze nemumhanzi wekare-kare semarekodha ekare, matepi, nezvimwewo, uye unogona kuzorora nekunakidzwa nemimhanzi kumba munguva yako yemahara.
▲ Imba yekutandarira fenicha
Sarudza hombe dema yeganda sofa ine nyore dhizaini. Idzi fenicha dzinofanirwa kugadzirwa nematanda uye nesimbi arts kuti dzikwane nenzvimbo yese yekutandarira.
Isa sherufu yemabhuku yakagadzirwa nematanda nesimbi pakona yeimba yokutandarira uye isa chigadziko chesimbi pedyo nayo kuti unakidzwe nokuverenga pano neapo pamba.
Sarudza kapeti yakasviba-uye-chena geometric manhamba. Wedzera tafura yekofi yakagadzirwa nesimbi ine buri dhizaini pamwe chete netafura yemapuranga padivi pesofa uye isa zvimwe zvekushongedza zvaunofarira pairi kuti uwane uye kupfuma uye kushongedza kwakanaka.
▲ Mukoto uri pakati peimba yekudyira neimba yekutandarira
Usanamatira zvakapambwa zvakawanda asi siya nzira pakati pekudyira neimba yekutandarira kuita kuti nzvimbo yese iwedzere kuwanda.
▲Waini kabati muimba yekudyira
Sevha nzvimbo uye ronga mativi ese uye pasi pehwindo sill sedivi rewaini kabati yekuchengeta uye kuratidza inonaka yeEuropean mabhodhoro ewaini.
▲Tafura yekudyira yeMarble
Sarudza kaviri-layer denderedzwa marble inotenderera tafura yekudyira inofananidzwa nemhando mbiri dzakasiyana dzematafura ekudyira nezvigaro, uye pendi yekushongedza yakaturikwa pairi, iri nyore uye ine rudo. (MuEurope haana rudzi urwu rwetafura)
Shandisa chimiro chakareruka cheScandinavia fenicha. Isai mubhedha wemapuranga nemakusheni emubhedha, shure kwayo kune emerald-ruvara kumadziro ekumashure; pamubhedha, mashizha eyero matsva nemapiro anopedzisa imba yekurara yerunako yakanyatsogadzirwa.
Shongedza mukamuri yevana neakasiyana evasikana vakanaka matoyi, mabhokisi ekupfeka, yakasarudzika yemhuri katuni yemifananidzo, uye macheya-taye. Wedzera kushandiswa kwenzvimbo yekamuri yevana vako nekubatanidza dhesiki+wadhiropu+tatami dhizaini mumadziro akapendwa nepingi.
Imba yekugezera ine tabhu chena. Shandisa girazi sechikamu pakati penzvimbo yakanyorova (shawa & bhavhu) nenzvimbo yakaoma yechigaro chechimbuzi. Sanganisa tema uye chena pasi mataira nemadziro machena uye matema kuti ugadzire yakapusa uye inoyevedza yekugezera.
Nguva yekutumira: Nov-11-2020
mwenje wekushongedza, mwenje wakatungamirira, Modern Garden Art, Metal Garden Decoration, mwenje wezuva, Garden Decor Metal,